Bakteeriya lagu kala qaado galmada oo iska celisa daawada oo ka dilaacday Ingiriiska iyo qaylo dhaan - iftineducation.com
Bakteeriya keenta cudurada lagu kala qaado galmada ee gonoriya (gonorrhoea) ayaa daawooyinkii lagula tacaalayay waxba ay ka qaadi waayeen taas oo keentay qaylo dhaan ka soo baxda wasaarada caafimaadka Ingiriiska. Bakteeriyada gonoriya ayaa ka dilaacday gobolka Leeds ee Woqooyiga Ingiriiska iyo degmooyin kale oo ku teedsan isla gobolkaasi. Wasaarada caafimaadka ayaa digniin xooga ka soo saartey una gudbisey dhamaan goobaha caafimaadka iyadoo ku wargelinaysa in ay faaftey bakteeriyadan khatarta ah.
Cudurada lagu kala qaado galmada ayaa yeesha kolba wajiyo cusub waxayna dadku la yaabanaayeen cudurka dilaaga ee Aydhis oo wali aan loo hayn daawo. Daawada cudurada lagu kala qaado kalmada ayaa inta badan fudud waxase jirta in ay aduunka ku badanayaan raga isqaba iyo naagaha is qaba iyo raga iyo dumarka oo la galmooda ugu yaraan 10 nin ama naag sanadkii.
Gudoomiyaha ururka ka hortaga cudurada lagu kala qaado galmada ee Ingiriiska ayaa sheegay in arintu ay xuntahay oo ay hadda tahay in qofkii laga helo cudurkaasi ay tahay in la raadiyo intii qof ee uu la seexday si loo joojiyo ayuu yiri faafinta cudurka.
Wuxuu intaa ku daray in dadka laga helay ay yihiin dad caadiya, khaniisiinta oo rag iyo dumarba leh. Bakteeriyadan ayaa keenta in dheecaan huruuda uu kaa socda xiniinyaha iyo kaadida oo kugu adkaata halka haweenkana uu dhiig ka yimaado inta u dhaxaysa labada dhiig ee caadada.
Tan ugu halista badan oo ah in loo gudbiyo ilmaha uurka ku jira haddii haweenaydu uur qaado. Wuxuu masuulkaasi sheegay in hadda siinayaan dadka lagu helay daawooyin kale oo aan la ogeyn in ay ka daaweyn karaan. Sawirka hoose waa muuqaalka bakteeriyada keenta cudurada lagu kala qaado galmada ee GONORIYA.